Simplecast: သင်၏ Podcasts ကိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့်ထုတ်ဝေပါ Martech Zone
Simplecast: သင်၏ Podcasts ကိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့်ထုတ်ဝေပါ
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 30, 2017 သောကြာနေ့, မတ်လ 31, 2017 Douglas Karr
podcasters တွေလိုပဲငါတို့ podcast ကို Libsyn မှာလက်ခံခဲ့တယ်။ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ရွေးချယ်စရာများနှင့်ပေါင်းစည်းမှုများစွာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာနည်းပညာမြင့်မားတယ်။ ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုမှာရိုးရိုး Podcast တခုကိုထုတ်လွှင့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒေတာအားလုံးကိုဖြည့်ဖို့အခက်အခဲရှိလိမ့်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။
များသောအားဖြင့်အစဉ်အလာအစဉ်အလာအားဖြင့်အစဉ်အလာအရအစဉ်အလာအရဤကဲ့သို့နက်ရှိုင်းစွာလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူ၏အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်အလွန်အန္တရာယ်များသောသို့မဟုတ်နောက်ကျနေဆဲဖြစ်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ခြေလှမ်းနေရာအရပ်ပါပဲ! Simplecast ဆိုသည်မှာ Libsyn နှင့်အခြား platform များထက်သာလွန်သည့်ရိုးရှင်းသော podcast ထုတ်ဝေရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။
နေ ရိုးရှင်းသော၊ ကြော့ရှင်းသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံရှိသည်။ Podcast အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေခြင်း (သို့) သင်၏လက်ရှိဖြစ်စဉ်များကိုအလွယ်တကူတင်သွင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
သင်၏ podcast အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်သွင်းခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။
အသံမဲ့ Podcasts ကိုလွှဲပြောင်းခြင်း - သင်၏လက်ရှိ Podcasts များကိုလျင်မြန်စွာလွယ်ကူစွာလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် Simplecast သို့တင်သွင်းခြင်း။
အကန့်အသတ်မဲ့ Bandwidth & Storage - bandwidth နှင့်သိုလှောင်မှုစရိတ်များအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ၎င်းသည်သင်၏ Simplecast အထုပ်ထဲတွင်ပါ ၀ င်ပါတယ်။
Embeddable အသံဖွင့်စက် - သင်၏ podcasts များအတွက်ရိုးရှင်းသောအသံဖွင့်စက်ကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့သို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုထည့်ပါ။
နားထောင်သူမက်ထရစ် - လူကြိုက်များတဲ့အရာကို၊ ဘယ်သူနားထောင်နေတယ်၊ ​​ဘယ်လိုနားထောင်နေတယ်ဆိုတာကိုလျင်မြန်စွာကြည့်ပါ။
အကွိမျမြားစှာမန်နေဂျာများ - သင်၏ podcast ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အခြားသူများကိုဖိတ်ခေါ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်တစ် ဦး တည်းကဘာလဲ?
စိတ်ကြိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုလက်ခံပါ - သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းအတွက်အထောက်အပံ့ဖြင့်သင်၏ podcast အတွက်ရိုးရှင်းသော၊ လက်ခံထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များ။ ပုံစံတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။
Tags: podcast hosting အတွက်podcast ထုတ်ဝေရေးPodcast ထုတ်လွှင့်သည်podcasts တွေကိုထုတ်ဝေရန်နေ
Facebook Ad Targeting Options ဆိုတာဘာလဲ။